Accueil > Gazetin'ny nosy > Antehiroka : kaominina mamoa-tsampona
Antehiroka : kaominina mamoa-tsampona
Nanaitra ny mpitantana sy ny mpiasa rehetra ato amin’ny orinasa La Gazette de le Grande Ile ny fahafantarana ny fomba fitantanana misy eo anivon’ny kaominina Ambohibao Antehiroka, ao anatin’ny distrikan’
Ambohidratrimo. Asa hoe lalàna nalaina tahaka avy aiza no mihatra ao amin’ity kaominina iray ity satria dia ny fiara mandeha tsara eny an-dalana izay misy mandona indray no ampandoavina lamandy. Omaly alakamisy 22 febroary dia nandalo teny amin’iny faritra Ambohibao iny ny fiaran’ny orinasa La Gazette de la Grande Ile iray. Nandeha tamin’ny hafainganam-pandeha antonony tsara ny fiara tamin’io fotoana io ka nijanona rehefa nijanona ny fiara nandeha teo alohany. Noho ny antony tsy fantatra anefa dia nisy bisikileta iray mpitondra mofo nandona ny fiara avy ao aoriana. Mafy ny fifandonana satria vaky ary niparitaka tsy nisy noraisina ny fitatara na ny “pare-brise” avy ao aoriana. Toy ny mahazatra rehefa misy ny lozam-pifamoivoizana tahaka izao dia tsy maintsy mijanona eo am-pitoerana eo ny fiara, miandry ny fahatongavan’ny mpitandro filaminana. Rehefa natao moa ny resaka tamin’ny zandary dia taitra sy valalanina ny mpamilin’ny fiara rehefa nilaza ny zandary fa tsy maintsy mandoa lamandy any amin’ny kaominina ny fiara rehetra izay tratran’ny lozam-pifamoivoizana tahaka izao, na iza na iza diso. Toe-javatra izay mahagaga ary mampanontany tena ihany satria tsy misy eto ambonin’ity tany ity ka ny fiara misy mandona indray no voasazy mandoa lamandy raha tsy ao amin’io kaominina Ambohibao Antehiroka io ihany. Raha ny lojika, ary izany no misy manerana izao tontolo izao, dia tsy tokony ho voasazy mihitsy ny fiara iray tra-doza tahaka izao raha toa ka voamarina fa tsy nisy ny fahadisoany na dia kely aza. Ny eto amin’ity Madagasikara ity moa efa ahitàna ny zavatra mamoa-tsampona rehetra ka tsy mahagaga raha misy ny karazana lalàna toy izany.
Fivorian’ny parlemanta: Mbola voaporofo fa fanjakana kitotoa no misy eto
Tapaka nandritra ny filankevitra ny minisitra natao tamin’ny alarobia teo fa ny alatsinainy 26 febroary ho avy izao no hanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon’ny parlemanta. Tsy dia zava-baovao loatra ny fahafantarana izany satria tao anatin’ny herinandro vitsy izay, efa nilaza ary namerimberina ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier fa tsy ho ela intsony fa dia ho haroso eny amin’ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna vaovao izay hifehy ny fifidianana eto amintsika na ny “code électoral”. Raha ny tatitra nataon’ny mpitondra tenin’ny governemanta dia miisa 3 ny volavolan-dalàna fehizoro mifandraika amin’ny fifidianana izay ho dinihana sy hankatoavin’ireo parlemantera amin’ity fivoriana tsy ara-potoana hisokatra amin’ny alatsinainy ity: ny volavolan-dalàna fehizoro izay mifehy ny resaka fifidianana ankapobeny sy ny fitsapan-kevi-bahoaka; ny volavolan-dalàna fehizoro mifehy ny fifidianana filohan’ny repoblika ary ny volavolan-dalàna fehizoro mifehy ny fifidianana solombavambahoaka. Ankoatra ireto volavolan-dalàna fehizoro lehibe 3 ireto dia mbola miisa 11 ny volavolan-dalàna hafa ho haroson’ny governemanta izay mbola ho dinihana sy ho lanian’ireo depiote sy loholona. Raha atambatra dia 14 ny isan’ireo volavolan-dalàna tsy maintsy dinihana sy ankatoavina, 12 andro anefa raha ela indrindra ny faharetan’ny fivoriana tsy ara-potoana, araka ny voalazan’ny Lalàmpanorenana. Manoloana izany toe-javatra izany dia mipetraka ny fanontaniana: “amin’ny fomba ahoana no ahafahan’ireo solombavambahoaka sy ny loholona handinika sy hankato volavolan-dalàna miisa 14 ao anatin’ny 12 andro?” Na ireo volavolan-dalàna fehizoro 3 lehibe mikasika ny fifidianana ireo fotsiny aza dia heverina fa tokony tsy ho ampy satria zava-dehibe ary iankinan’ny aim-pirenena izany ka mila fandinihana sy adyhevitra lalina. Tsara marihana koa anefa fa saika volavolan-dalàna lehibe avokoa ireo haroson’ny governemanta eny amin’ny parlemanta. Isan’izany ohatra ny volavolan-dalàna ahafahana manitsy ny lalàna laharana 2014-020 natao tamin’ny 27 septambra 2014, mikasika indrindra ny loharanom-bolan’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ny fitsipika mifehy ny fifidianana eny ifotony sy ny fikarakarana azy, ny volavolan-dalàna mikasika ny fehezan-dalàna momban’ny herinaratra (code de l’électricité), ary ny volavolan-dalàna hiadiana amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola ny asa fampihorohoroana. Ny zavatra hitranga amin’io fivoriana tsy ara-potoana io dia ho atao toy ilay fiteny hoe “taratasy alefa any amin’ny paositra” ireto volavolan-dalàna miisa 14 ireto satria tsy handinika lalina na hanisy ady hevitra azy ireo ny depiote sy ny loholona fa avy hatrany dia ho laniana an-jambany, tahaka efa fanao tao anatin’izay efa-taona nitondran’ny HVM izay. Tsy mahagaga raha betsaka amin’ireo mpandalina sy mpamakafaka ny raharaham-pirenena no milaza fa Antenimierampirenena sy Antenimierandoholona “passoire” no misy eto amintsika fa tsy mba tahaka ny parlemanta misy any ivelany any. Izany rehetra izany no mbola vao mainka manaporofo fa fanjakana kitoatoa no misy eto amin’ity Madagasikara ity amin’izao fotoana izao noho ny tsy fahaiza-mitantana avy amin’ireo mpitondra. Any amin’ireo firenena mandroso mantsy dia mety maharitra andro maromaro na herinandro vitsy mihintsy ny fandinihana sy fankatoavana volavolan-dalàna iray, ny eto amintsika anefa volavolan-dalàna 14 be izao no laniana ao anatin’ny 12 andro monja.